Warbixin Somaliland Iyo Puntland Ku Eedaysay In Ay Diideen Diblomaasiyaddii Qaramada Midoobey, Kana Digtay In Colaadda Tukaraq Ay Balaadhan karto | Gabiley News Online
Warbixin Somaliland Iyo Puntland Ku Eedaysay In Ay Diideen Diblomaasiyaddii Qaramada Midoobey, Kana Digtay In Colaadda Tukaraq Ay Balaadhan karto
July 8, 2018 - Written by admin
Hay’adda caalamiga ah ee xasaradaha adduunka oo magaceeda loo soo gaabiyo ICG, ayaa Hargeysa(Geeska)-Warbixin kooban oo ay soo saartay International Crisis Group 27 ka bishii lixaad 2018, waxa ay kaga warrantay xogteeda la xidhiidha iska horimaadka hubaysan ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo maamulgobaleedka Soomaaliya ee Puntland ku dhex maraya Tukaraq oo ay ku tilmaamtay magaalo Istaraatiiji ah oo furin u noqotay dagaalka ay labada dhinac ugu jiraan gacan ku haynteeda.
Saamaynta uu dagaalku ku yeelanayo mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Gaas
Waxa ay sheegtay in qabsahada Tukaraq ay shaqada koowaad u tahay madaxweyne Gaas, oo ay sheegtay in toddobaaddii u horreeyey bishii Juun, uu guddoomiyey kulamo taxane ahaa oo taageero loogu raadinayey dagaal la qaado; waxa aana ugu dambeeyey khudbaddii uu ka horjeediyey baarlamaanka maamulgobaleedka oo uu wacad ku maray in uu xoreeyo dhammaan dhulka uu sheegay in ay Somaliland ka haysato. Laakiin maadaama oo aanay guushu gacantiisa ku jirin, ballanqaadyadaasi waxa ay u horseedi karaa hoos u dhac iyo dhibaato hor leh. Warbixinta oo arrintaas ka hadlaysaana waxa ay tidhi, “Laakiin kor u qaadista rajada dadka [Ee ah in dhulkaas dib loo soo qabsanayaa] waa khamaar uu madaxweynuhu ciyaarayo. Waa run in markaas la taagan yahay uu midho siyaasadeed ku helayo, gaar ahaan marka la eego cadhada dadweynaha ee ku jihaysan Somaliland. Laakiin dib u soo qabashadaas uu ballanqaadayo oo uu ku guuldarraystaa, waxa ay ku yeelanaysaa cawaaqib foolxun oo god ku ridi karta rajada uu ka qabo in dib loo doorto”
Saamaynta ay colaaddu ku yeelanayso Somaliland
Warbixinta hay’adda xasaradaha adduunka waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Puntland oo keliya aanay ahayn cidda hadallada colaadda abuurayaa ay ka imanayaan, balse ay sida oo kale ka imanayaan dhinaca madaxweynaha Somaliland, oo ay sheegtay in uu mar yidhi, “Haddii ay dagaal doonayaan, diyaar baan u ahay. Waxa aanan u dhigi doonaa casharkii aan baray [Siyaad Barre]”
Culayska uu dagaalku labada dhinacba ku hayo
Warbixinta waxaa lagu sheegay in dagaal ka dhaca Tukaraq uu maamul gobaleedka Puntland ku noqon doono furin labaad oo u soo raacda tii hore ugu furnayd ee deegaanka Galgala. Halkaas oo ay dagaallo adagi ku dhex maraan kooxo Islaamiyiin ah oo ay DAACISH-ta Soomaaliya ka mid tahay.
“Dhinaca Somaliland, waxaa muddooyinkii u dambeeyey jiray cadho gudaha ah. Xukuumadda madaxweyne Biixi, waxa ay waajahaysaa colaad beeleedda soo noqnoqotay ee Ceel Afweyn, oo gaobalka Sanaag ah, taas oo u dhexeysa laba beelood oo ka tirsan laba qabiilo oo waaweyn oo Isaaq ah” Colaaddaas ayaa warbixinta lagu sheegay in sii hurinteeda ay qayb ka tahay xanaftii doorashadii madaxweynaha ee dhacday dabayaaqadii sannadkii 2017 ka. Waa aanay intaas ku sii dartay in doorashadaasi ay kordhisay loollankii goballada iyo beelaha u dhexeeyey.
ICG waxa ay sheegtay in mucaaradadda gudaha ee Somaliland ay keeni karto xasilooni darro siyaasi ah. Halka colaadda Puntland ka dhaxaysaana ay dhaawici karto sumcaddii sida adag ay Somaliland kaga heshay gobalka iyo dunida ee ahayd in ay tahay meel uu ka jiro nidaam xasiloon oo si fiican loo maamulo. Deeqaha muhiimka ah ee Somaliland lagu caawiyo oo uu horumarkeedu ku xidhan yahay, ayaa sees u ah in ay samayso horumar waara oo dhianca dawladnimada ah, sida oo kale waxaa caawiyey habkii nabdoonaa ee ay xal ugu raadin jirtay khilaafaadka abuurma. Dagaal ka dhaca Sool iyo Sanaagna waxa uu abuurayaa khatarta ah in uu maydhmo meeqaamkaas ay Somaliland ku leedahay dunida.
Warbixintu waxa ay ka digtay in iska horimaadka Somaliland iyo Puntland haddii uu sii adkaado, uu sababi karo colaad dabadheeraata oo cawaaqib xun ku yeelata Somaliland iyo Soomaaliya, suurtagalna ay tahay in ay sii huriso xasilooni darrada imikaba ka jirta Soomaaliay. “Waxa ay sababi kartaa barakac, waxa aanay fursad iyo dhul siin kartaa xoogagga Islaamiyiinta ah ee Alshabaab iyo farac ka mid ah DAACISH oo inkasta oo aanu badnayn, dhulkaas jooga” ayaa lagu yidhi warbixinta ICG.